नयाँ वर्षमा गोरखकालीमा दर्शनार्थीको घुइँचो - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
| बुधबार, कार्तिक १०, २०७८
नयाँ वर्षमा गोरखकालीमा दर्शनार्थीको घुइँचो
Published On : १ बैशाख २०७५, शनिबार २०:२०
प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथा धार्मिक क्षेत्र गोरखकाली मन्दिरमा दर्शनार्थीको भिड बढेको छ । मन्दिरमा पूजाआराधना गरेर नयाँ वर्षको सुरुवात गर्ने प्रचलन अनुसार बैशाख १ गते गोरखकाली मन्दिरमा ठुलो संख्यामा भक्तजनको घुइँचो लागेको हो ।
शनिबार नयाँ वर्ष मनाउन र पुजाआजाका लागि विभिन्न ठाउँबाट दर्शनार्थीहरु मन्दिरमा आएका थिए । विशेष गरि नयाँ वर्ष, अष्ठमी र दशैँको दिन मन्दिरमा भिड लाग्ने गर्दछ । मनोकांक्षा पुरा हुने विश्वासका साथ टाढा टाढाबाट भक्तजनहरु आउने गर्दछन् ।
मन्दिरका पुजारी केशव खनालले प्रत्येक नयाँ वर्षमा भक्तजन बढ्ने गरेको बताए । ‘हिन्दु धर्मावलम्वीहरुले धार्मिक पूजा आराधना मार्फत दिन र वर्षको सुरुवात गर्ने गर्छन्’ उनले भने, ‘त्यसैले नयाँवर्षमा मन्दिरमा बढी भिड हुँदा भक्तजनहरुलाई कठिन समेत हुन्छ ।’
सात हजार भक्तजनले पुजा गरे
मन्दिरमा शनिबार सात हजार भन्दा बढिले पूजा गरेका छन् । मन्दिरमा बोका र भेडाको बलि दिने प्रचलन छ । मन्दिरका पुजारी खनालका अनुसार शनिबार ४० वटा बोकाको बलि दिइएको छ । मन्दिरमा दर्शन गर्न र घुम्नको लागि विभिन्न जिल्लाबाट भक्तजनहरु आउने गर्दछन् ।
मन्दिरमा १२ जना पुजारी भएकोमा दुई जना ब्राह्मण, एक जना क्षेत्री र बाँकी मगर जातिका छन् । पुजाका लागी उनिहरु पालो गरेर मन्दिरमा आउने गरेको मन्दिर विकास समितिले जनाएको छ ।
गोरखकाली मन्दिरमा पुजा गर्न आउने भक्तजनले सास्ती पाएका छन् । मन्दिरमा भक्तजनलाई व्यवस्थित तरिकाले पुजाआजा गर्नको लागी ब्यबस्थापन गर्न नसक्दा भक्तजनले सास्ती खेपेको धादिङका कुमार श्रेष्ठले बताए । नवलपरासी देखी भिम अर्याल बिहान नै आएपनी तीन घण्टा लाइन बसेर पुजा गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
शौचालय र पिउने पानीको समस्या
मन्दिर परिसरमा शौचालय नहुँदा दर्शनार्थीलाई समस्या छ । विशेष गरेर बालबालिकाले शौचालयको असुबिधा हुँदा मन्दिर परिसरमा नै शौच गर्न बाध्य छन् । गोरखाको प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्रका रुपमा परिचीत गोरखकाली मन्दिर बैशाख १२ गते गएको बिनाशकारी भुकम्पबाट क्षति भएको थियो । तर हालसम्म पनि मन्दिर पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।
नौ वटा सिसि क्यामराको निगरानीमा मन्दिर
गोरखकाली मन्दिरमा नौ वटा सिसि क्यामरा जडान गरिएको छ । मन्दिर संरक्षणमा र भक्तजनहरुको सेवालाई सहज गराउन सिसि क्यामरा जडान गरिएको हो । मन्दिर परिसर बाहिर जुत्ता चप्पल र झोला लगायतमा सामनहरु निषेध हुँदा बाहिर खोल्नुपर्ने बाध्यता भएको र सामानहरु हराउने गरेको हुँदा पनि सिसि क्यामरा जडान गरिएको बताइएको छ । news source enayapatrika
एमाले गोरखाको पालिकास्तरको अधिवेशन सम्पन्न, चुमनुब्री र शहीद लखनको पछि हुने
मंसीर दोस्रो साता दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको नेकपा एमालेले मंगलबार गोरखाका नौ वटा पालिकामा
एमाले गोरखा र पालुङटार नगरपालिकाको अध्यक्षमा बस्नेत र श्रेष्ठ
मंसीर दोस्रो साता दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको नेकपा एमालेले मंगलबार गोरखामा पालिकास्तरको अधिवेशन गरेको
गोरखामा कोरोनाका ८ जना सक्रिय संक्रमित
गोरखामा कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या ८ रहेको छ । स्वास्थ्य कार्यालय गोरखाका अनुसार मंगलवार ९
एमाले धार्चे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा सुकबहादुर घले
मंसीरमा आउला त दरौँदी लिफ्टिङको पानी
ठूलो एकादशीमा त्रिवेणी मेला र भलिबल प्रतियोगिता हुने